Waa Kuwan Liiska 7 Ciyaartoy Ee Uu Diego Simeone Ka Walwalsan Yahay In Ay Diyaar U Noqon Karaan Kulanka Adag Ee Liverpool. - Gool24.Net
Waa Kuwan Liiska 7 Ciyaartoy Ee Uu Diego Simeone Ka Walwalsan Yahay In Ay Diyaar U Noqon Karaan Kulanka Adag Ee Liverpool.
February 11, 2020 Mahamoud Batalaale
Tababaraha kooxda Atlrtioc Madrid ee Diego Simeone ayaa ka walwalsan xaalada taam ahaansho ee todoba ciyaartoy oo kooxdiisa ah ka hor kulanka talaadada ee ay soo dhawayn doonaan kooxda koobka Yurub difaacanaysa ee Liverpool.
Liverpool waxay markii ugu horaysay ku soo laaban doontaa garoonkii ay koobkeedii lixaad ee Champions Leauge ku qaaday ee Wanda Metropolitano Stadium halkaas oo ay marti ugu noqon doonaan jabhada Simeone.
Laakiin kooxda caasimada Spain ka dhisan ee Atletico Madrid waxaa walaac ku haya in ay dib u heli karaan todoba xidig oo kooxdooda ka tirsan si ay kulanka Liverpool ee Champions League ugu ciyaari karaan Wanda Metropolitano Stadium.
Liverpool waxay marka hore la ciyaari doontaa kooxda Norwich City inta ayna saddex maalmood kadib booqan garoonkii ay dhamaadkii xili ciyaareedkii hore koobka Champions League ku qaadeen ee Wanda Metropolitano Stadium.
Diego Simeone waxa uu haddaba ogyahay in Diego Costa uu seegi doono kulanka lugta kowaad ee Champions League ee ay Liverpool la ciyaari doonaan kaas oo tan iyo bishii Nevember 2019 kii ka maqnaa kooxdiisa.
Wargayska AS ee magaalada Madrid ka soo baxa ayaa shaaciyay in Diego Costa uu seegi doono kulanka Liverpool ee lugta hore ee wareega 16ka Champions League.
Laakiin sidoo kale Alvaro Morata oo dhaawac ku soo gaadhay kulankii Madrid Derby ayaa waqtiga kula baratamaya kulanka Liverpool sidii uu taam u noqon lahaa inkasta oo aan ilaa hadda la ogayn haddii uu diyaar noqon karo.
Waxa kale oo la xaqiijiyay in da’yarka Joao Felix uu isna hubaashii seegi doono kulanka Liverpool ee lugta hore ee Champions League taas oo Diego Simeone walwal dheeraad ah ku sii abuuraysa.
Kieran Trippier oo qaliin maray ayay isna hubaal tahay in uu seegayo kulanka Liverpool, wuxuuna shaki ku jiraa in ay kulanka Reds taam u noqon karaan Jose Gimenez, Santiago Arias iyo Hector Herrera.
Todobadan xidig oo door wayn ku lahaa kooxda Diego Simeone ayaa waqti xun ku soo beegmay in ay kooxdooda ka maqan yihiin ama ayna taam ahayn.
Dhinaca Liverpool waxaa la filayaa in Jurgen Klopp uu dib u wada heli doono dhamaan ciyaartoyda ugu muhiimsan kooxdiisa ee ay ugu horeeyo Sadio Mane oo si buuxda tababarka Reds ugu soo laabtay.